भाषा, संस्कृतिमाथि विदेशी अतिक्रमण « Drishti News – Nepalese News Portal
भाषा, संस्कृतिमाथि विदेशी अतिक्रमण
आजको आधुनिक युगमा कुनै मुलुकलाई आफ्नो अधिनमा ल्याउनुप¥यो भने त्यो मुलुकमाथि भौतिक आक्रमण गरिरहनु पर्दैन । सम्बन्धित मुलुकले गौरव गर्ने उनीहरूको भाषा, संस्कृति र शिक्षालाई लोप गराएर त्यो मुलुकमा आफ्नो भाषा, संस्कृति र शिक्षा थोपरिदिएपछि त्यो मुलुक स्वतः विदेशी अधिनमा जान्छ ।
जस्तै पञ्चायतकालमा नेपालको आफ्नो मौलिक शिक्षापद्धतिलाई मासेर सेमेष्टर पद्धतिको नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भयो । जुन शिक्षापद्धतिले ज्ञान होइन, जागिर खाने प्रमाणपत्र दिन्छ । यसबारे इतिहासविद डा. महेशराज पन्तको भनाइ चाखलाग्दो छ । उनी भन्छन्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृति विभागबाट आजसम्म दीक्षित विद्यार्थीहरूले प्राचीन शिलालेख पढ्न सक्दैनन् भने यस्तो शिक्षाको के काम ?
अंग्रेजी भाषामा मात्र सवारी साधनहरूमा संख्या पाटी (नम्बर प्लेट) इम्बोस्ड नम्बर पाटी राख्नू भनी हालसालै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला एक उदाहरण मात्र हो । जबकि नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहँदै सर्वोच्चको अंग्रेजीमोह उदेकलाग्दो छ । प्रविधिले मान्छेलाई नभएर मान्छेले प्रविधिलाई बनाएको हुँदा प्रचलित वर्णलाई मास्ने होइन, त्यसैअनुरूपको प्रविधि निर्माण गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री अंग्रेजीमा मात्र हुन्छ भन्ठान्नु जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउनु हो ।
यस्तै विद्यालय तहबाट संस्कृत भाषाको पठनपाठनलाई हटाइयो । जसले गर्दा आजका युवापुस्ता अंग्रेजी माध्यमबाट नेपाली सिक्ने स्थितिमा पुगेका छन् । नेपाली वर्णमालाबाट अ आ इ ईलाई लोप नै पारिएको छ । र युवापुस्तालाई अंग्रेजी भाषाको दास हुन बाध्य पारिएको छ ।
यस्तै हाम्रो चाडबाड, गीत, संगीत र भाषा संस्कृतिलाई भारतीय भाषा, संस्कृतिले छोप्न लागेको छ । भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरू नेपालमा निर्वाधरूपमा चल्न पाउँदछन् । तर नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरू भारतमा चल्नका लागि भारत सरकारले अनेक बिघ्नबाधाहरू तेस्र्याउने गर्दछ । नेपाली भाषाका पुस्तक पत्रपत्रिकाहरू भारतमा निर्यात हुन सक्दैनन् । यो एक किसिमको सांस्कृतिक अतिक्रमण हो । हाम्रो तिहार पर्व दीपावलीमा परिणत हुन लागिसक्यो । त्यस्तै दशैँ पनि दशहरामा परिणत हुँदैछ ।
यसै श्रृंखलामा हाम्रो मौलिक पहिचानलाई ध्वस्त पार्न केही वर्षदेखि सरकारी र अन्य निकायबाट षड्यन्त्रपूर्वक मानक नेपाली भाषालाई पटकपटक आक्रमण गरिँदै आएको छ । सवारी साधनहरूमा नेपाली भाषाको पहिचान एवं अस्तित्व नै मेट्ने गरी अंग्रेजी भाषामा मात्र सवारी साधनहरूमा संख्या पाटी (नम्बर प्लेट) इम्बोस्ड नम्बर पाटी राख्नू भनी हालसालै सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला एक उदाहरण मात्र हो । जबकि नेपालको संविधानको धारा ७ (१) मा ‘देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने व्यवस्था हुँदाहँदै सर्वोच्चको अंग्रेजीमोह उदेकलाग्दो छ । प्रविधिले मान्छेलाई नभएर मान्छेले प्रविधिलाई बनाएको हुँदा प्रचलित वर्णलाई मास्ने होइन, त्यसैअनुरूपको प्रविधि निर्माण गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । आधुनिकीकरण र प्रविधिमैत्री अंग्रेजीमा मात्र हुन्छ भन्ठान्नु जनतालाई दिग्भ्रमित तुल्याउनु हो ।
गएको महिना यस विषयमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले सो विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सवारी नम्बर पाटीमा नेपाली भाषाको स्थानमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने कुनै जरुरी नभएको भन्दै यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग परामर्श गरी अंग्रेजी भाषाको प्रयोग रोक्ने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । किनभने, नेपाली भाषा हाम्रो पहिचान हो । राष्ट्रको गौरव हो । झन् मातृभाषा त आमाजत्तिकै श्रद्धेय र स्तुत्य हुन्छ । भाषाप्रतिको मोह संवेदनशील हुन्छ । भाषाको सम्बन्ध समाज र राजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ ।
तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको यस विषयमा ध्यानाकर्षण हुनु सम्पूर्ण नेपालीका लागि गौरवको कुरा हो । यसले हाम्रो मौलिकताको रक्षा हुन्छ । सम्बन्धित निकायबाट सवारी नम्बर पाटी अंग्रेजीमा राख्ने व्यवस्था खारेज गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देश हुन आवश्यक छ । नेपाली भाषाको रक्षार्थ मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालले जुन अभियान चलाइरहेको छ उनीहरुको त्यो प्रयास सह्राहनीय छ ।